'बलियो सरकारले काम पनि बलियो गर्न सक्नुपर्छ' : कृष्ण धराबासी (वरिष्ठ साहित्यकार) | Kendrabindu Nepal Online News
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार १५:५६
कृष्ण धराबासी, नेपाली साहित्यको आख्यान विधाका एक सुपरिचित नाम । उनका आधाबाटो, तल्लो बाटो, राधा, ग्रेटफल्स, रेडस्क्वायर लगायत २८ कृतिहरु नेपाली साहित्यमा सुरक्षित छन् । साहित्य साधनामै उनका ४ दशक भन्दा बढी समय बितिसके । अझै सक्रियता निरन्तर छ । अबको केहि महिनामै उनको २९ औं कृतिका रुपमा मुक्तिका सपनाहरु शिर्षकको निबन्ध संग्रह सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । उनै वरिष्ठ साहित्यकार धराबासीसँग हामीले यसपटक कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ केन्द्रबिन्दुका वरिष्ठ सहायक सम्पादक ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपीले उनीसँग गरेको कुराकानी
१ . पछिल्लो समय नेपाली साहित्यका पाठक घटेका हुन् ?
पाठक घटेका कसरी भन्नु र ? दिनदिनै साहित्यीक पुस्तकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यतिकै त मान्छेले पुस्तक विमोचन गर्दैन होला नि त, सजिलो छैन नि पुस्तक निकाल्न पनि । तर समय अनुसार पाठकहरु केहि घटबड हुन सक्छ । मान्छेले खोजेको जस्तो भएन भने कुनै पुस्तक तुलनात्मक रुपमा कम विक्रि होलान् तर पाठक घटेकै चाहिं होइन । पुस्तक भनेका दाल चामल होइन, पछि सम्म पनि विक्रि भइरहन्छ ।
२. हिजोआज यहाँको व्यस्तता के मा छ ?
केहि पुस्तकहरुको सम्पादन गरिरहेको छु । जीवन आर्चायको एउटा स्मृतिग्रन्थको सम्पादन गर्दैछु । सिके प्रसाईंका विचारहरुको दोस्रो संस्करणको पनि सम्पादन गर्दैछु । मेरो आफ्नै निबन्धसंग्रह पनि प्रकाशनको तयारीमा छ । साथीभाईहरुले बोलाउँदा साहित्यीक कार्यक्रमहरुमा पनि समय दिइरहेको छु ।
३.एउटा साहित्यकारको दृष्टिले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
राजनीति भनेकै यस्तै हो । यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षवीच समन्वय भइरहन्छ । अहिलेकै कुरा गर्नु पर्दा सरकार बलियो छ , विकासका कामहरु विस्तारै भइरहेका छन् । विकास भनेको एकैपटक हुने कुरा होइन । विस्तारै हुन्छ । सरकारले गरेका कामहरु राम्रा भएनन् भने जनताले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । त्यस्तो असहिष्णु खालको प्रतिपक्ष पनि अहिले छैन । असल लोकतन्त्र भनेको यस्तै हो । मान्छेको जातै असन्तोषी जात हो । विस्तारै काम हुने गरेको अवस्थालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । भएका कामहरुलाई त भएका भन्नु पर्छ नि । तर बलियो सरकारले काम पनि बलियो गर्न सक्नु पर्छ ।
४.व्यक्तिगत रुचीका विषयहरु चाहिं के छन् नि ?
म पूर्णकालिन लेखनमा लागेको मान्छे । जागिर पहिले नै छोडेको हुँ । अधिकांश समय लेखनमै छु । स्वस्थ रहुन्जेल सम्म मेरो समय साहित्यसेवामै बित्नेछ । खाने बस्ने भनेका सबैका हुन्छन् तर फरक विषय मेरो अरु केहि छैन । साहित्य नै हो ।
५.नयाँ पुस्ताका लेखकहरुलाई यहाँको सल्लाह के छ ?
लेख्ने कुरा सजिलो छैन । भावनामा बगेर मात्र होइन, यथार्थमा अडिएर लेखिएका साहित्यहरु पाठकले रुचाउँछन् । त्यहि अनुसार गर्न सक्ने हो भने साहित्य उज्ववल क्षेत्र हो । समाजलाई परिवर्तन गर्ने काम पनि साहित्यले गर्ने हुँदा हामीले साहित्य श्रृजना गर्दा पनि समाजका विषयमै केन्द्रीत रहन सक्नु पर्छ । साहित्य समाजको ऐना हो भनेर साहित्यकारले बुझ्न सक्नु पर्छ । राम्रो अध्ययन गरेर साहित्यको सेवा गर्न सकिन्छ ।
५ प्रश्न, krishna dharabasi
Prevकाँग्रेसलाई जीवन्त राख्न महाधिवेशन आवश्यक: नेता कोइराला
अब पत्रकारलाई पनि पेन्सनNext